बुद्ध र बिक्रमका गुरु एउटै, के यो पटकको उपाधि पनि पोखराले नै जित्ला ? - समृद्ध नेपाल
बुद्ध र बिक्रमका गुरु एउटै, के यो पटकको उपाधि पनि पोखराले नै जित्ला ?
पोखरा। नेपाल आइडलमा अन्तिम चारमा पर्न सफल विक्रम बराललाई पोखरामा शनिबार भव्य स्वागत गरिएको छ। नेपाल आइडल–२ मा टप फोमा परेपछि उनी गृहनगर पोखरा आएका हुन्। पोखरा विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्न उनका शुभचिन्तकको भिड लागेको थियो।
टप फोरमा पुग्न सफल भएकोमा बराललाई स्वागत गर्न पञ्जेबाजासमेत बजाइएको थियो। पोखरा विमानस्थलबाट उनलाई बाजागाजासहित नेपाल आइड–२ मा जित्न सफलता मिलोस भन्दै पोखराका विभिन्न स्थानमा परिक्रममा गरिइएको थियो। पहिलो नेपाल आइडल पोखराका बुद्ध लामा भएका थिए।
दोस्रो नेपाल आइडलमा पोखराकै विक्रम बरालले राम्रो प्रस्तुति दिइरहेका छन्। विक्रम नेपाल आइड–२ बन्नेमा पोखरेलीको विश्वास छ। अध्ययन र संगीत दुबै क्षेत्रमा अब्बल विक्रम नेपाल आइडल–२ मा पनि उत्कृष्ट भएर नेपाल आइडल बन्नेमा विश्वस्त रहेको उनका संगीत गुरु नवराज बरालले बताए। नवराज पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामाका पनि संगीत गुरु हुन्।
विक्रम बराल अध्ययनमा पनि अब्बल छन्। मदरल्याण्ड उच्च माविका विद्यार्थी विक्रम प्लस टुमा कास्की जिल्ला टपर हुन्। बीबीएसमा पनि उनले विशिष्ट श्रेणी ल्याएका छन्। अध्ययन र संगीतलाई सँगसँगै अघि बढाएका बरालले संगीतमा करिअर खोज्ने सुनाए।
उनले नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणमा परीक्षा परेकाले बिचैमा छाडेका थिए। घरमा आमाले नै संगीतलाई माया गर्ने र बाबा पनि गीत संगीत भने पछि हुरुक्क हुने भएकोले संगीतमा रुची बढेको उनले सुनाए।
कक्षा ५ मा अध्ययन गर्दा गाएको एउटा गीतबाट गुरुबाट प्रशांसा पाएपछि उनमा सानैदेखि गीत संगीततर्फ आकर्षण बढेको थियो।
पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विक्रमले आफूले नेपाल आइडलमा आफ्नो प्रस्तुतिबाटै दर्शकको मन जित्न सकेकोले पोखरेली, गण्डकी प्रदेश र सम्पूर्ण नेपालीका माया पाउने उनले विश्वास गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा विक्रम बुवा शन्तराम, आमा सरस्वतीसँगै संगीत गुरु नबराजको साथमा बसेका थिए। उनले आफ्नो सांगीतिक यात्राका बारेमा छोटो जानकारी दिए।
कार्यक्रममा विक्रमकी आमा सरस्वतीले ‘कालीपारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी’ बोलको गीत गाएर पत्रकार सम्मेलनमा प्रशांसा बटुलेकी थिइन्। आफू गीत संगीत भनेपछि भात खान नै बिर्सने उनले सुनाइन्।
पहिले हाम्रो पालामा गीत गाउने अवसर नपाएकाले अहिले छोरोले आफ्नो सपना साकार पार्न लागेकोमा निकै खुशी रहेको उनले बताइन्। विक्रमका बुवा शन्तरामले पनि छोराले पढाइका साथै गीत संगीतमा पनि उत्कृष्ट रहेकोमा गौरव लागेका बताए।
पाँच दिनदेखि लागेको भिषण डढेलो पाथीभरा मन्दिरमा पुग्यो !
विदेशले तातो हावामात्र खुवायो, आफैंले खोलेको सैलुनले कार चढ्ने बनायो
आज नौ महिनापछि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्दै, दर्शनार्थी खुशी !
यी महिनामा जन्मनु भएको हो भने हजुर सार्है भाग्यमानी हुनुहुन्छ जन्नुहोस !
आज महा शिवरात्री देख्ने बित्तिकै भगवान शिवजिको दर्शन गरि पुरा पढ्नुहोस मनले चिताएको कार्य पूरा हुनेछ !
म्यूजिक भिडियोमा ‘माग्ने बुढा’को पारिश्रमिक ५ लाख
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न बन्द त्रिधार्मिकस्थल हलेसी खुला जय हलेसी महादेव !
द भ्वाइसबाट सुशील गड्तौला आउटः रसिला आँखा र भारी मन अनि ‘काँडा रैछ जीवन’ (भिडियो)
बुद्ध वाज बर्न इन इण्डिया’ गलत विवरण अमेरिकी पाठ्यक्रमले सच्याइयो !
शंकटा देवीको दर्शन गरि ॐ लेखेर शेर गर्नुहोस् आफ्नो दशाग्रह सबै सान्ता हुनेछ ! 卐 ॐॐॐ !
झाँक्री जगदेव बाबालाई यसरी मान्न थालियो ‘भगवान’, बन्यो मन्दिर सबैले शेयर गर्नुहोला !
क्रिसमसडेको सबै नेपालीमा सुभकामना !
अमित बरालको घरमा अचम्म भो, बर्षौअघि मृत्यु भएका दाईकै अनुहार र बानी लिएर भाई जन्मिए